तपाईं राम्रो जीवन बाँचिरहेका छौं? — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
sonjj • अगस्ट 19, 2013 मा 9:53 छु • जवाफ
यो सन्देश त प्रेरक छ!!! तपाईं ली यात्रा धन्यवाद!!! एक रूपमा 45 जवान आमा वर्ष3आफ्नो बिसवां मा बच्चाहरु र एक अठार वर्ष पुरानो म सधैं छन् जवान मान्छे को उदाहरण को लागि खोज छु “असल जीवन” ख्रीष्टमार्फत!!! म मेरो बच्चाहरु संग आफ्नो सन्देश साझेदारी हुनेछ तर म यसलाई प्रेम किनभने तपाईं आफैलाई पालना गर्न जारी हुनेछ र म आफ्नो संगीत प्रेम!!!
tiffany LeRoux • अगस्ट 19, 2013 मा 9:53 छु • जवाफ
CherishJesusLuv • अगस्ट 20, 2013 मा 5:53 छु • जवाफ
म जीवित छु र उहाँले मलाई भित्र उहाँको राम्रो जीवन राख्नु भएको छ :) र म सधैंभरि येशू ख्रीष्ट संग अनन्त जीवन को भलाइ सबै आदर कारण कसको एक मेरो राजा संग जीवित गर्न तत्पर.
sasha • अगस्ट 21, 2013 मा 4:58 बजे • जवाफ
भिडियो आशिष् हो! म हेर्दै यो आनन्द. आफ्नो शब्द को लागि परमेश्वर धन्यवाद! यात्रा, तपाईं भनिरहेका छन् के म तपाईंलाई जगेडा गर्न पद दिनको प्रेम गर्छन्. एकदमै रमाइलो सन्देश र म निश्चित आफ्नो Jokes मा हाँसेको थियो. ताकि चिकन संयुक्त बारेमा साँचो!!!